COVID-19 Health Advisory Announcement - Code Red Level Extension
We wish to inform you on the latest updates with regards to the current Code Red Level extension. Pun Hlaing Estate will extend the current Code Red level to 21 October 2020 based on guidance from the Government announcement on5October 2020.
The announcement states that public statements, orders, notifications, and directives of Union-level organisations and the Union ministries for the protection, control and prevention of COVID-19 will be extended to 21 October 2020 to further contain the spread of the virus.
In the interest of Pun Hlaing Estate residents’ health and wellbeing, we will reopen the following facilities on Saturday 10 October.
Golf course (from6am to4pm) and practice facilities (caddies will be provided 1:1)
After4pm, the golf course will be opened for other activities such as walking, running, cycling, fishing and picnics.
We will supply hand sanitiser at the entrance and provide cleaning staff during golf course operating hours to aid in the maintaining ofahealthy facility.
Please refer to WHO advice for good hygiene practice; and How-To Guide to prevent infection:
Estate Management: x1461 (from landlines within the Estate) or 09955400911
Medical Information: Pun Hlaing Siloam Hospital Hotline 013684323
၂၀၂၀ အောက်တိုဘာလ ၅ ရက်နေ့က တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ၏ ထုတ်ပြန်ချက်နှင့်အညီ ယခုလက်ရှိ ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်းအိမ်ရာအတွင်းတွင် ထုတ်ပြန်ထားသော အနီရောင်အဆင့်ကို ၂၀၂၀ အောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်နေ့အထိ တိုးမြှင့်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း လေးစားစွာ အသိပေးအကြောင်းကြားလိုပါသည်။
ကြေညာချက်မှာ တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများ၏ ပြည်သူလူထုထံထုတ်ပြန်ထားသော ကြေညာချက်များ၊ အမိန့်စာများ၊ ညွှန်ကြားချက်များ၊ သတိပေးချက်များကို လတ်တလောအသက်ရှုလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါ Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ကို ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်း၊ ထိန်းချုပ်ခြင်းများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သည့်အတွက် ၂၀၂၀ အောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်နေ့အထိ ဆက်လက်တိုးမြှင့်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာထားသည်။
ပန်းလှိုင်ဂေါက်ကွင်းအိမ်ရာဝင်းအတွင်းနေထိုင်သူများ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် ကောင်းမွန်စွာနေထိုင်နိုင်ရေးတို့ကိုရှေးရှုလျက် အောက်တိုဘာလ ၁၀ ရက် စနေနေ့ မှစတင်၍ အောက်ဖော်ပြပါနေရာများကို ပုံမှန်အတိုင်း ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဂေါက်ကွင်း (မနက် ၆ နာရီ မှ ညနေ ၄ နာရီ အထိ) နှင့် လေ့ကျင့်ရေးနေရာများ (ကစားသမားတစ်ဦးလျှင် caddy တစ်ဦးဆီ ပံ့ပိုးပေးသွားမည်ဖြစ်သည်)
ညနေ ၄ နာရီ နောက်ပိုင်းတွင် ဂေါက်ကွင်းကို အိမ်ရာဝင်းအတွင်းနေထိုင်သူများ လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ အပြေးလေ့ကျင့်ခြင်း၊ စက်ဘီးစီးခြင်း၊ ငါးမျှားခြင်း နှင့် ပျော်ပွဲစားထွက်ခြင်း အစရှိသည်တို့ကို လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် ဆက်လက်ဖွင့်လှစ်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
လက်ဆေးရည်များကိုဂိတ်ပေါက်များတွင် ထားရှိပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး အသုံးအဆောင်များကို ပိုးသတ်သန့်ရှင်းမှုများလုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက်လည်း ဂေါက်ကလပ်ဖွင့်ထားသည့် အချိန်အတွင်း သန့်ရှင်းရေးဝန်ထမ်းများကိုထားရှိပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကျန်းမာရေးအလေ့အကျင့်ကောင်းများနှင့် ရောဂါပိုးကူးစက်မှုကိုကာကွယ်ရန် လိုက်နာကျင့်သုံးရမည့်နည်းလမ်းများ အစရှိသည့်အကြောင်းများကို ဖော်ပြပေးထားသည့် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏ လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်ကြရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့် အကူအညီတစ်စုံတစ်ရာလိုအပ်လာပါက ဆက်သွယ်ရန်
အိမ်ရာစီမံခန့်ခွဲမှု : အိမ်ရာဝင်းအတွင်းရှိ ဖုန်းလိုင်းဖြစ်သော 1461 (သို့) 09955400911 သို့ခေါ်ဆိုမှု ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များကို သိရှိရန် : ပန်းလှိုင်စီလုံဆေးရုံ အရေးပေါ်ဖုန်းလိုင်းဖြစ်သော 013684323 ကို ခေါ်ဆိုမှု ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။